Malawi oo la wareegtay Guddoonka Midowga Afrika • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Malawi oo la wareegtay Guddoonka Midowga Afrika
Malawi oo la wareegtay Guddoonka Midowga Afrika
Madaxweynaha dalka Malawi ayaa maanta si rasmi ah ulla wareegay Hogaanka ama Guddoonka Midowga Afrika, kadib markii uu tartankii ka haray Hogaamiyihii horey xilkaasi u hayey Muccmar Qadaafi, Madaxweynaha dalka Liibiya.
Ayadoo uu maanta shirweynihii 14aad ee Midowga Afrika ka furmay magaalada Addis Ababa, ayaa waxaa kahor intuusan shirka furmin hareeyey madasha shirka arrinta la xariirta cida loo dooran Doono Guddoomiyaha sanadkan ee Midowga Afrika.
Horey ayey u jireen warar sheegaya inuu markale uu xilkaasi isu soo taagayo Hogaamiyaha dalka Liibiya Muccamar Qadaafi oo asagu xilkaasi hayey sanadkii lasoo dhaafay ee 2009.
Qadaafi ayaa furitaankii shirka si kadis ah ugu dhawaaqay inuu xilka Guddoomiyaha Midowga Afrika uu si rasmi ah ugu wareejin doono Madaxweynaha dalka Malawi Mr.Bingu wa Mutharika.
“…Walaalkay ahna Madaxweynaha Jamhuuriyadda Malawi ayaan si rasmi ah ugu wareejin doonaa xilka Guddoomiyenimada….” ayuu yiri Col.Qadaafi khudbadiisii furitaanka shirka.
Qadaafi ayaa ka waantoobey inuu markale codsado in xilkaasi loo sii kordhiyo,Â kadib markii ayÂ ka biyo diideen inta badan Hogaamiyaasha Qaarada Afrika, ayadoo horey dastuurka u yaal Midowga Afrika uu si rasmi ah u qeexayo in Guddoonka Midowga Afrika uu yahay mid wareegto ah oo Guddoonka uu hayn karo xilkaasi Hal sano oo kaliya.
Waxaa sidoo kale Qadaafi culeys weyn kasoo fuulay wadamada koonfurta Afrika oo ayagu si wadajir ah isugu raacay in dalka Malawi uu u matalo dalalka ku yaal koonfurta Afrika oo sanadkan sharciyan xaq ulleh inay qabtaan Guddoonka Midowga Afrika.
Wadamada xubnaha ka ah ururka dalalka koonfurta Afrika oo loo yaqaan SADAK (SADC) ayaa ayagu shirkoodii ay ku yeesheen dalka Congo bishii Agoosto ee sanadkii lasoo dhaafay ee 2009, ku heshiiyey in dalka Malawi ay si wadajir ah ugu sharaxaan Guddoonka Midowga Afrika.
Wadamada ku yaal Waqooyiga Afrika, Galbeedka iyo Bariga, ayaa ayguna soo dhaweeyey go’aanka ay qaateen wadamada Koonfurta Afrika, arrintan oo caqabad ku noqotay Muccmar Qadaafi oo asagu helay kaliya taageerada dalal kooban.
Muccmar Qadaafi ayaa asagu ku doodayey in hawshii uu bilaabay ay wax badan Qabyo ka yihiin oo u baahnaa inuu sii dhameystiro.
Hogaamiyaha Liibiya ayaa horey usoo bandhigay Qorsho uu rabay in Midowga Afrika loo bedalo in ay isku darsadaan Wadamada Qaarada Afrika oo laga dhigo (Unites States of Africa) Qorshahan oo ah mid uusan weli ku guuleysan.
Hase yeeshee Qadaafi ayaa u muuqda hogaamiye wax isbedal ah kusoo kordhiyey Midowga Afrika, ayadoo lagu wado in magacyada Guddiyadda Midowga Afrikla iyo Guddoonka wax laga bedalo, taasi oo hada lagu wado in la hirgeliyo.
Qadaafi ayaa sheegay inuusan u baahneyn jegada Guddoonka Midowga Afrika, asagoona sheegay inuu sii wadi doono dadaalkiisa xataa haduusan hada xilkaasi heyn, asagoo sheegay inay ka go’antahay in la mideeyo dalalka Afrika.
Madaxweynaha Dalka Malawi Mr.Bingu wa Mutharika oo halkaasi asaguna ka khudbeeyey ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay xilka loo doortay asagoo sheegay in xiligan la gaaray wakhtigii Afrika ay horumari lahayd.
“…Waxaa la gaaray xiligii Afrikaanku horumarin lahaayeen Qaaradooda Afrika, macquul maaha in aan nahaano Qaarada ugu Qanisan Caalamka, hadana dadkayagu ahaado kuwa ugu faqrisan adduunka…”ayuu yiri Guddoomiyaha cusub ee Midowga Afrika.
Shirka ayaa si socon doona labada maalmood ee soo socda waxaan lagu wadaa in qodobo badan lagu soo bandhigo shirkaasi, ayadoona Wafdiga ka socda Dowlada Soomaaliya ee uu Hogaaminayo Madaxweynaha DFKMG Shiikh Shariif lagu wado inuu halkaasi khudbad kasoo jeediyo.